ओलीको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’, कतै खैलाबैला, कतै झमेला « risingsunkhabar
ओलीको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’, कतै खैलाबैला, कतै झमेला
प्रकाशित मिति : ६ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १५:२८
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो, अनौठो र आश्चर्यजनक राजनीतिक कदम चाल्नुभएको छ । उहाँको यो कदमलाई राजनीतिक गतिरोधको मैदानमा सर्जिकल स्ट्राइक सरह मान्न सकिन्छ ।
केपी ओलीले ‘एक कदम पछाडि दुई कदम अगाडि’ खालकाे कदम चाल्नुभएकाे छ ।
कसैले सोचेका थिएनन्, सम्भवत विपक्षी खेमाले पनि सोचेको थिएन ओलीले यस्तो अप्रत्याशित कदम चाल्नुहोला भनेर । विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनेर हात उठाउने र नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोलिदिने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबाट देखिने गरी प्रत्यक्ष लाभ विपक्षी गठवन्धनले पाउनेछ । तर, उनीहरुले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
सतहमा मात्र हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मलाई सरकार चाहिएन, जसलाई चाहिएको छ लगे हुन्छ’ भनिदिनुभएको छ । उहाँको कदमको देखिने अर्थ यही हो । तर, यो कदमभित्र लुकेको छ भयानक सर्जिकल स्ट्राइक ।
प्रधानमन्त्रीको कदम बुझ्न बुधबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का दुई अध्यक्ष बीच भएको सहमति नियाल्नुपर्छ । सो सहमतिमा सरकारको पक्षमा नउभिने, प्रतिपक्षमै बस्ने भनिएको छ । यसको अर्थ हो– प्रधानमन्त्री ओलीको अल्पमतको सरकारले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा विपक्षमा बस्ने ।
जसपा विपक्षमा जानासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना समाप्त भयो । कांग्रेसले विश्वासको मत नदिने, माओवादी केन्द्रले पनि मत नदिने । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु, त्यस्तो मत लिन ३० दिनको समयसीमा कुर्नु भनेको समस्याग्रस्त देशको मूल्यवान समय खर्च गर्नु मात्र हुन्थ्यो ।
त्यही भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुभयो । उहाँले राष्ट्रपतिलाई उपधारा ५ अनुसारको सरकार बनाउन सिफारिस गरिदिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्न, नपाउने भएँ, त्यसैले नयाँ सरकार बनाउन प्रक्रिया थाल्नुस् भनेको भए पनि हुन्थ्यो । मन्त्रिपरिषद्ले धारा नै तोकेर प्रक्रिया बताइदियो ।
के यो प्रक्रियासँग कांग्रेस र माओवादी केन्द्र असहमत छ ? यसको जवाफ खोज्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको एउटा बैठक चिहाउनुपर्ने हुन्छ । जतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले शितल निवासमा सपथ लिइरहनुभएको थियो, त्यसबेला देउवा निवासमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईसँग मन्त्रणा गरिरहनुभएको थियो । त्यो मन्त्रणामा उहाँहरुले गर्नुभएको निर्णय थियो– ओलीलाई विश्वासको मत लिन नदिने, त्यसपछि उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको माग गर्ने ।
विपक्षी खेमालाई शंका थियो– उपधारा ५ मा नगई ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि सीधै विघटन गरिदिनु हुने त होइन ? यही डरका कारण माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निकट मिडिया, बुद्धिजीवी तथा वकिलहरुले अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत नपाए मध्यावधी हुँदैन, उपधारा ५ मा जान्छ भन्दै चिच्याउन थालेका थिए ।
देउवा, प्रचण्ड, उपेन्द्र र बाबुरामहरुले शंका गरेजस्तो काम नगरेर माग गरे अनुसारको काम गरिदिनुभएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले । त्यो काम हो– उपधारा ५ अनुसारको सरकार बनाउन ढोका खोलिदिने ।
केपी ओलीलाई विश्वासको मत लिन नदिएर जहाँ पुग्ने योजना विपक्षी खेमाले बनाइरहेको थियो, ओलीले अहिले नै त्यहाँ पुराइदिनुभएको छ । विपक्षमा खैलाबैला र झमेला एकसाथ उत्पन्न भएको छ । जनयुद्धकालमा प्रचण्डले सत्रुकाे कित्तालाई चकित हुने गरी आक्रमण गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्याे, सत्रुले आक्रमण गर्नु अघि नै आक्रमण गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्याे, पहल हातमा लिनुपर्छ भन्नुहुन्थयाे । प्रचण्डले जनयुद्धमा प्रयाेग गरेकाे भन्दा शानदार ट्याक्टिस ओलीले प्रयाेग गर्नुभएकाे छ ।
आफूले चाहेको भन्दा पहिल्यै माग पूरा हुँदा विपक्षी खेमामा सर्जिकल स्ट्राइक हुन पुगेको छ । केपी ओलीले दुई फड्को पहिले नै हान्नुहुन्छ भन्ने विपक्षी गठवन्धनको कल्पना बाहिरको कुरा थियो । ओलीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ, विश्वासको मत पाउनुहुन्न, अनि खेल खेलौंला भन्ने विपक्षीको दाउ थियो । ओलीले अहिले नै खेल सुरु गरिदिनुभयो– सर्जिकल स्ट्राइक गरेर ।
अब शुक्रबार अपरान्ह ५ बजेभित्र विपक्षी गठवन्धनले बहुमत जुटाउनुपर्नेछ, नसकेको अवस्थामा चुनावको विचल्ली भोग्नुपर्नेछ ।